အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ယနေ့.....မှ ....သို့..... နှစ်ပေါင်းများစွာ...!
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:24 PM
ငါတို့ ဖခင် ကြီး ကတိုင်းပြည် အတွက်တာဝန် ကျေခဲ့ ပေ မယ့် သမိုင်းဖျောက် ချင်သူတွေ က သမိုင်း ပျောက်အောင် လုပ်ချင် နေကြတယ်....။
လွပ်လပ် မှု အတွက် တိုက်ပွဲဝင် တော်လှန်ရေး တွေက တော့ အမြဲ ရှိနေ မှာဘဲ...
ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်ရင် စစ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါ..
အဆိုးဆုံးအခြေအနေ အတွက် ပြင်ဆင်ထားပါ..
တနေ့ တော့ ငါ့တို့ တွေ အားလုံး ရင်ကော့ ပြီး နိုင်ငံတော် သီချင်း ကို သံပြိုင် သီဆို နိုင်မှာပါ.....။
"ငါတို့ရဲ့ ခန္ဓာတွေ ကျဆုံးချင်ကျဆုံးသွားလိမ့်မယ်… ဒါပေမယ့် ငါတို့ရဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေကတော့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေမှာပဲ…။ မိစ္ဆာကောင်တွေ မှတ်ထား “လူကိုသာ မင်းတို့သတ်လို့ရမယ် ငါတို့ဝိဥာဉ်ကို မင်းတို့သတ်လို့မရဘူး”…။ ငါတို့မသေသရွေ့ ငါ့မြေပေါ်မှာ မိစ္ဆာတွေ အသက်ရှူခွင့် မရှိစေရ…။" အဲဒီစာသားလေးက အရမ်းထိတယ်ဗျာ။
နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုပဲ ရင်ထဲက ဆိုသွားတယ် ...။
`တော်လှန်ရေးနေ့´ အထိမ်းအမှတ် အခုပို့စ်လေးမှာ ကျနော် အနှစ်သက်မိဆုံး စာသားကတော့ `ငါတို့ ပြည်သူကို ငါတို့ ကာကွယ်မယ်´ ဆိုတဲ့ စကားရပ်လေးပါပဲ။ အဲဒီလို သစ္စာမျိုးနဲ့ တပ်မတော်သားပေါင်း မြောက်မြားစွာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါစေလို့ အခုပို့စ်ရဲ့ အမှတ်တရအဖြစ် ဆုတောင်းမိပါတ
ရင်ထဲ က ခံစားချက် အစစ် အမှန်နဲ့ ဂုဏ်ပြုရင်း နိုင်ငံတော် သီချင်းကို အသံတိတ် သီဆို သွားပါတယ် :D
<<< Jit >>> I am very Proud of YOU!!!! This article thrill me until I get gooseberry all over me. I know eveyone of us would feel the same feeling as you so Thank you so much for presenting this article on behalf of Every Burmese who love their Mother Land. You are strongly supported from me :).
ရေးထားတာလေး ကောင်းတယ် အစ်ကို မာန်ပါတယ်၊ မျှတာမှုပါတယ် ၊ နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုလဲ ထပ်တူသီဆိုသွားပါတယ်ဗျာ....။ သစ္စာတရာနဲ့သနားညှာတာတတ်တဲ့ ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော်သားများ ထာဝရရှင်သန်ပြီး အများကောင်းကျိုး သယ်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ........။
ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းပါစေ ။
“ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်ရင် စစ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါ” Ta yar mya ta daw စစ် ko u saung ning daw နိုင်ငံ tar kaung yatanar lay hpyit ning bar ze`` kwe..... Bow to you.
“Nothing is to be preferred before justice.” Socrates quote
ငါတို့၏ ဦးခေါင်းမှာ သွေးတို့ဖြင့်ရဲရဲနီ၏။
အခုကထဲက တို့အရည်အချင်းကို သွေးထားကြရအောင်....
တောတောင် ရေမြေ သဘာဝကို ချစ်တာဟာ နိုင်ငံတော် ကို ချစ်စိတ် အမျိုးကိုချစ်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ် မြင်းညိုကြီးကို စီး တိုက်ပွဲဝင်ဓားကိုဆွဲ
ရဲရဲတောက် မိန့်ခွန်းတွေချွေခဲ့တဲ့ ဖခင်ကြီးနဲ့တကွ ငြိမ်းချမ်းရေး တိုက်ပွဲ အောင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ၀ိညာဉ် အပေါင်းအား အလေးပြုရင်း နိူင်ငံတော် သီချင်းကို
သီဆိုသွားပါတယ် ။ ။
နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ရင်ထဲက သီဆိုကာ
အနာဂတ် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးကို ထမ်းရွက်ကြမယ်သူတွေ. ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က်တွေ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ ဥာဏ်ရည် ဥာဏ်သွေးတွေနဲ့ အနာဂတ်အတွက် အားမာန်ရနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ် blackdream ရေ...
ပိုစ့်လေးက ကောင်းတယ်လို့လည်း ပြောပါရစေ
ပို့ စ်လေးကောင်းတယ် ညီလေးရေ။ စာသားတွေ ပြောင်မြောက်တယ်။ ရင်ထဲကလာမှန်းသိသာတယ်။